Shiinaha Nidaamka dab damiska ceeryaanta ee cadaadiska sare leh (2.2) warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Anbesec
Nidaamka dab-damiska ceeryaanta biyaha cadaadiska sarreeya leh (2.2)
Nidaamka dab damiska ceeryaanta ee cadaadiska sare leh wuxuu leeyahay labada shaqaba iyo waxtarka buufinta biyaha iyo daminta gaaska. Waxay leedahay labadaba saameynta qaboojinta ee nidaamka buufinta biyaha iyo neefta nidaamka bakhtiinta gaaska.
Cadaadiska sare ee xakamaynta bamka ceeryaanta biyaha wuxuu ka kooban yahay xakamaynta xiddiga Delta, xakamaynta barnaamijka, dareeraha, wareegga xakamaynta, golaha wasiirada iyo qaybo kale.
1. Qaybaha ugu muhiimsan ee nidaamka
HPWM wuxuu ka kooban yahay bamka weyn ee cadaadiska sare, bamka sugitaanka, waalka elektromagnetic, shaandhada, xakamaynta mashiinka korontada, iskuxirka taangiga biyaha, shabakada bixinta biyaha, qaybaha sanduuqa waalka, cadaadiska sare madaxa buufinta ceeryaanta (oo ay kujiraan nooca furan iyo nooca xiran), nidaamka xakamaynta alaarmiga dabka iyo aaladda buuxinta biyaha.
2. Kala soocida dalabka ceeryaanta biyaha cadaadiska sareeyo
(1) Nidaamka ceeryaanta biyaha oo si buuxda u quusay
Nidaamka dabka ceeryaanta biyaha oo si siman u buufin kara ceeryaanta aagga ilaalinta oo dhan si loo ilaaliyo dhammaan walxaha ilaalinta ee gudaha ku jira.
(2) Nidaamka ceeryaanta biyaha dalab ee maxalliga ah
Ku buufinta ceeryaanta biyaha si toos ah shayga ilaalinta, loo isticmaalay in lagu ilaaliyo shay ilaalin gaar ah gudaha iyo banaanka ama meelaha maxalliga ah.
(3) Nidaamka ceeryaanta biyaha dalab ee gobolka
Nidaamka ceeryaanta biyaha si loo ilaaliyo aag la sii cayimay oo ah aagga ilaalinta.
(1) Wax wasakh ah ama waxyeelo u geysan maayo deegaanka, walxaha la ilaaliyo, oo ah shey ku habboon deegaanka u habboon.
(2) Waxqabadka dahaadhka korantada wanaagsan, aamin ah laguna kalsoonaan karo la dagaalanka dabka qalabka nool
(3) In yar oo biyo ah oo loo isticmaalo daminta, iyo haraaga wasakhda biyaha.
(4) Ku buufinta ceeryaanta biyaha waxay si weyn u yareyn kartaa qiiqa iyo sunta ku jirta dabka, taas oo sahleysa ka bixitaan badbaado leh.
(5) Waxqabadka bakhtiinta dabka wanaagsan iyo codsiyada ballaaran.
(6) Biyaha - wakiilka dab-bakhtiiye, wide kala duwan oo ilo iyo qiimo jaban.
4. Ku habboon la dagaallanka dabka soo socda:
(1) Dabka ololaya ee ololaya ee galka ku jira, keydadka macluumaadka, kaydka alaabta dhaqanka, iwm.
(2) Dabka dareeraha ah ee ololaya ee saldhiga Haydarooliga, qolka shidaalka quwada saliida, saliida saliida bakhaarka, bakhaarka saliida marawaxadaha, qolka matoorka naaftada, qolka matoorka shidaalka, qolka mashiinka qiiqa shidaalka ee tooska ah, qolka kabinetka saliida badalashada iyo meelaha kale.
(3) Dabka dabka ololaya ee ololaya ee qolalka marawaxadaha gaaska iyo qolalka mishiinka gaaska ee sida tooska ah loo shido.
(4) Qalabka korontada wuxuu ku gubtaa qolka qeybinta, qolka kumbuyuutarka, qolka mashiinka xogta lagu farsameeyo, qolka mashiinka isgaarsiinta, qolka kontoroolka dhexe, qolka weyn ee xarigga, tunnelka fiilada (marinka), wiishka xargaha iyo wixii la mid ah.
(5) Imtixaanada dabka ee meelaha kale sida qolalka baaritaanka mishiinka iyo godadka taraafikada ee ku habboon xakamaynta dabka ceeryaanta.
5. Nidaamka dab damiska ceeryaanta ee cadaadiska sare leh waxaa lagu bilaabi karaa seddex qaab, si otomaatig ah u bilaabi, gacanta (fog ama mid maxalli ah) bilow iyo farsamo deg deg ah ku bilow.
Otomaatiga: Si loo beddelo habka xakamaynta dab-bakhtiiyeha oo loo beddelo Auto, markaa nidaamku wuxuu ku socdaa xaalad otomaatig ah.
Markuu dab ka kaco aagga la ilaaliyo, qalabka dab-demiska ayaa baaraya dabka wuxuuna u dirayaa calaamadda dab-hayaha dabka. Kontaroolaha qaylo-dhaanta dabka wuxuu xaqiijinayaa aagga dabka sida ku cad cinwaanka qalabka dabka lagu ogaado, ka dibna wuxuu diraa calaamadda xakamaynta ee isku xiridda nidaamka daminta dabka, wuxuuna furayaa aagga u dhigma. Ka dib marka waalka la furo, cadaadiska tuubada ayaa hoos u dhacaya bamka cadaadiska ayaa si otomaatig ah u bilaabmaya in ka badan 10 ilbidhiqsi. Sababtoo ah cadaadiska wali wuu ka yar yahay 16bar, bamka weyn ee cadaadiska sare wuxuu si toos ah u bilaabmaa, biyaha ku jira tuubada nidaamka si dhaqso leh ayey ku gaari karaan cadaadiska shaqada.
Gacanta ku xakameyso: Si aad ugu bedesho qaabka xakamaynta dabka Manual Control, markaa nidaamku wuu ku jiraa gobolka gacanta gacanta.
Bilowga fog: marka dadku helaan dabka iyaga oo aan ogaan, dadku way bilaabi karaan badhamada qalabka korontada ku shaqeeya ama solenoid filtarka maraya xarunta kontoroolka dabka fog, ka dibna bambooyin si toos ah ayaa loo bilaabi karaa si loo helo biyo lagu damiyo.
Ka bilow meesha: markay dadku dab helaan, way furi karaan sanduuqyada qiimaha gobolka, waxayna riixi karaan badhanka xakamaynta si loo demiyo dabka.
Bilawga xaaladaha degdegga ah ee farsamada: Xaaladda cilladda qalabka digniinta dabka, xakamaynta wiishka aagga ayaa gacanta lagu maamuli karaa si loo furo aagga Qalliinka si loo demiyo dabka.
Soo kabashada nidaamka:
Ka dib daminta dabka, jooji bamka weyn adiga oo riixaya badhanka joojinta degdegga ah ee koontaroolka kooxda mashiinka, ka dibna xir aaladda aagga ee sanduuqa waalka aagga.
Ka nadiifi biyaha dhuumaha muhiimka ah ka dib markaad joojiso mashiinka. Taabo batoonka dib-u-dejinta ee guddiga golaha xakamaynta bamka si aad nidaamka ugu sameysid xaaladda diyaarinta. Nidaamka waa la saxayaa oo la hubiyaa iyadoo loo eegayo barnaamijka ka-saarista nidaamka, si qaybaha nidaamka ay ugu jiraan gobolka shaqeeya.
6.1 Biyaha ku jira haanta biyaha dabka iyo qalabka biyo siinta cadaadiska dabka waa in si joogto ah loo badalaa iyadoo la waafajinayo jawiga deegaanka iyo xaaladaha cimilada. Tallaabooyin waa in la qaadaa si loo hubiyo in qayb kasta oo ka mid ah qalabka kaydinta dabka aan la qaboojin doonin xilliga qaboobaha.
6.2 Taangiga biyaha dabka iyo muraayadda cabirka heerka biyaha, qalabka gudbinta biyaha ee dabka labada dhinac ee waalka xagal waa in la xidhaa marka aan la fiirinayn heerka biyaha.
6.3 Marka la beddelayo isticmaalka dhismayaasha ama qaabdhismeedka, meesha alaabtu ku taal iyo dhererka xarriiqdu waxay saameyn ku yeelan doonaan howlaha lagu kalsoon yahay ee nidaamka, hubi ama dib u habeyn ku samee nidaamka.
6.4 Nidaamku waa inuu lahaadaa kormeer joogto ah iyo dayactir, twuxuu sanad walba hubiyaa nidaamka inuu buuxiyo shuruudaha soo socda:
1. Si joogto ah u cabbiro awoodda biyo-gelinta ee isha biyaha hal mar.
2. Hal kormeer oo buuxa oo loogu talagalay qalabka keydinta dabka, iyo hagaajinta cilladda oo dib loo cusbooneysiiyo.
6.3 Kormeerka seddexdii biloodba mar ee nidaamka waa inuu buuxiyaa shuruudaha soo socda ：
1. Dhammaadka dhammaadka heshiiska leh nidaamka tijaabada biyaha iyo koontaroolka xakamaynta ee u dhow tijaabada biyaha waalka biyaha ayaa la qaaday, hubinta bilowga nidaamka, howlaha qaylo-dhaanta, iyo xaaladda biyaha waa caadi;
2. Hubi waalka kontoroolka ee tuubada tubada meel furan.
6.4 Nidaamka kormeerka billaha ah waa inuu buuxiyaa shuruudaha soo socda:
1. Bilow inaad ku shubato bamka dabka hal mar ama mashiinka dabka gudaha kaxeeya ee mashiinka dabku kaxeeyo. Bilow, marka bamka dabka loogu talagalay xakamaynta otomaatiga ah, u ekaysii xaaladaha kontoroolka otomaatiga ah, bilow soconaya 1 jeer;
2.Qalabka solenoid waa in la hubiyaa hal mar waana in la sameeyaa tijaabinta bilowga, waana in lagu beddelaa waqtiga marka ficilku aanu caadi ahayn
3. Hubi nidaamka hal mar shaabadda koontaroolka ama silsiladaha xaaladoodu waa wanaagsan tahay, ha ahaato waalka waa in meel sax ah;
4.Muuqaalka haanta biyaha dabka iyo qalabka keenaya hawada cadaadiska hawada, heerka biyaha keydka ah iyo cadaadiska hawada ee qalabka biyo siinta cadaadiska hawada waa in la hubiyaa hal mar.
6.4.4 Samee hal muuqaal oo ah sanka iyo kormeerka tirada firaaqada, sanka oo aan caadi ahayn waa in lagu badalaa waqti habboon;
Maaddada ajnebiga ah ee ku taal sanka waa in laga saaraa waqtiga. Bedel ama rakib rusheeyaha waa inuu isticmaalaa baako gaar ah.
6.4.5 Nidaamka kormeerka maalinlaha ah:
Muuqaalka haanta biyaha dabka iyo qalabka keenaya hawada cadaadiska hawada, heerka biyaha keydka ah iyo cadaadiska hawada ee qalabka biyo siinta cadaadiska hawada waa in la hubiyaa hal mar.
Kormeerka maalinlaha ah waa inuu buuxiyaa shuruudaha soo socda:
1 .Ku samee kormeerka muuqaalka ah ee filtarka kala duwan iyo kooxaha koontaroolka ku xakameeya dhuumaha ilaha biyaha, oo hubi in nidaamku ku jiro hawl caadi ah
2 .Qiyaasta qolka ay ku rakiban yihiin qalabka keydinta biyaha waa in la hubiyaa, waana inuusan ka hooseyn 5 ° C.
6.5 Dayactirka, kormeerka iyo baaritaanka waa in si faahfaahsan loo diiwaan geliyaa.
Hore: Nidaamka daminta dabka ceeryaanta ee cadaadiska sare leh （2.1）
Xiga: Nidaamka ceeryaanta biyaha cadaadiska sare-FM la Ansixiyay (1)